GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Myanmar Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Baịbụl ekwughị na inwe mmekọahụ dị njọ. Ihe e dere na Baịbụl gosiri na ọ bụ onyinye Chineke nyere ndị lụrụ di na nwunye. O kere anyị “nwoke na nwaanyị.” O kwukwara na ihe ndị o kere “dị nnọọ mma.” (Jenesis 1:​27, 31) Mgbe ọ kpọtaara nwoke mbụ ahụ nwunye ya, o kwuru na ha ga-abụ “otu anụ ahụ́.” (Jenesis 2:​24) Na ha bụ otu anụ ahụ́ pụtara na ha nweere onwe ha ịna-enwe mmekọahụ, na-akpakwa ibe ha ezigbo nso.
Lee ihe Baịbụl kwuru gbasara obi ụtọ nwoke na-enwe ma ọ lụọ nwaanyị. Ọ sịrị: ‘Ṅụrịa ọṅụ n’ihi nwunye ị lụrụ n’okorobịa. Ka ara ya na-egbu gị dị ka mmanya n’oge niile. Ka ịhụnanya ya na-enye gị oké obi ụtọ mgbe niile.’ (Ilu 5:​18, 19) Chineke chọkwara ka mmekọahụ na-atọ ndị nwunye ụtọ. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji sị “ka di na-enye nwunye ya ihe ruuru ya; ka nwunye na-emekwara di ya otú ahụ.”​—1 Ndị Kọrịnt 7:3.
Chineke chọrọ ka ọ bụrụ naanị ndị lụrụ di na nwunye ga na-enwe mmekọahụ. Ọ bụ ya ka e kwuru ná Ndị Hibru 13:4. Ebe ahụ sịrị: “Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe kwesịrị nsọpụrụ n’etiti mmadụ niile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye gharakwa ịbụ ihe e merụrụ emerụ, n’ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko na ndị bụ́ di ma ọ bụ nwunye na-akwa iko ikpe.” Ndị di na nwunye ekwesịghị ịna-agba n’èzí. Obi ga-aka adị ma di ma nwunye ụtọ ma ọ bụrụ na onye nke ọ bụla ana-achọ otú ọ ga-esi emeta onye nke ọzọ mma n’ihi na Baịbụl sịrị na “a na-enweta obi ụtọ ka ukwuu n’inye ihe karịa ka a na-enweta n’ịnara ihe.”​—Ọrụ Ndịozi 20:35.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Baịbụl Ọ̀ Sịrị na Inwe Mmekọahụ Dị Njọ?